प्रचण्ड र माधव नेपालको नि’ष्कर्ष – ओलीले पार्टी फुटाईसके…हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
प्रचण्ड र माधव नेपालको नि’ष्कर्ष – ओलीले पार्टी फुटाईसके…हेर्नुहोस!
काठमाण्डौँ, १८ असार । बिहीबार दिनभर बालुवाटार र शीतल निवासको दौ,डधुपपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्, ‘पार्टी फुटको सं,घारमा पुगिसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली दुबै पद कुनै पनि हालतमा नछाड्ने, बरु पार्टी फु,टाउने र,णनीति लिएको उनीहरुको दा,बी छ । ‘उहाँले पार्टी फुटाइसक्नु भएको छ । तै पनि यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर आज र भोलि दिनभर प्रयास गरौं भनेर बैठक स्थगित गरिएको छ’ ओली इतर समूहका एक शीर्ष नेताले भनेका छन् ।
त्यही कारण स्थायी कमिटी बै,ठक पर्सि ११ बजे मात्र राखिएको नेताहरुले बताएका छन् । बै,ठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पार्टी एकतामा ग म्भीर सं,कट आएको बताएका छन् । पार्टी एकता ग,म्भीर सं,कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने ग म्भीर चासासहित आजको बैठकले पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र पार्टी,
सरकार र राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने महसुस गरेका कारण पर्सि ११ बजेसम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ’ उनले भनेका छन् ।
Previous तीनकुनेमा बुद्धपार्क नि’र्माण गरिँदै…हेर्नुहोस् ।
Next राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डले भने – कसैले उ’क्साहटमा नलाग्नुस्, सिंगो देशको राष्ट्रपति बन्नुस् ‘